Global Voices teny Malagasy » Fifamelezana Totohondry Noho ny Resaka Fandoavambola, Misisika Amin’ny Fanemozana Tsiny Ilay Vehivavy ny Sasany Amin’ireo Hong Konger, fa Tsy Ilay Lehilahy · Global Voices teny Malagasy » Print
Fifamelezana Totohondry Noho ny Resaka Fandoavambola, Misisika Amin'ny Fanemozana Tsiny Ilay Vehivavy ny Sasany Amin'ireo Hong Konger, fa Tsy Ilay Lehilahy
Voadika ny 28 Avrily 2017 4:45 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
“Ramatoa: Aleo hifampisasahana ny lany. Rangahy: Heverinao fa tsy ho voaloako angaha ny sakafo hariva?!” Ambainy avy amin'ny tantara an-tsary “Is But Brother.” Jereo ery ambany ilay tantara an-tsary manontolo. Nahazoan'ny Global Voices ny famoahana azy
Ny 24 Aprily, niely be tao Hong Kong ny tantara iray vaovao momba ny lehilahy iray sy vehivavy nosamborin'ny polisy fa nifamely totohondry tao amin'ny toerana iray fisakafoanana rehefa nifamaly momba ny fandoavana ny HK$2,200, eo amin'ny US$300 ho eo, sandan'ny sakafo hariva.
Ambaran'ny tatitra ety anaty aterineto fa noho ilay vehivavy nandà ny “go Dutch” (fiarahana mizaka ny lany) ka tsy hifampizara ny lazambidy (faktiora) no niteraka ny ady. Maro ireo mpaneho hevitra no haingana be tamin'ny fanomezana tsiny ilay ramatoa ho maka tombony amin'ny maha-vehivavy azy sy manery ilay lehilahy handoa ny lazambidy.
Kanefa, ora vitsy taorian'izay, nanazava ny tompon'ilay trano fisakafoanana hoe ny fisisihan'ilay vehivavy hanao ny “going Dutch” no niteraka ny fifamelezana. Voalaza fa nandà ilay rangahy, nandrovitra ny vola ary nampiasa hery.
Na dia efa nifanipaka tanteraka tamin'izay noeritreretina aza ny marina, mbola nanohy ilay fomba fijery nanatsiny ilay ramatoa ihany noho ilay ady nitranga ny sasany tamin'ireo mpisera ety anaty aterineto.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fanehoankevitra mahazatra  avy ao amin'ny sehatra fifampiresahan'ilay tranonkala malaza fifampiresahana Golden Forum rehefa niparitaka tety anaty aterineto ny vaovao mahakasika ilay fifamelezana:
Raha tsaraina amin'ny fijery an-dramatoa, ilay vehivavy dia tsy misy hafa amin'ireny sipa voaozona mampiavaka ny eto Hong-Hong ireny, izay mihevitra fa ny bandy foana no tokony handoa ny lazambidy.
Azo inonana fa efa nomanin'ilay bandy ny tokony haloa saingy nanafatra tafahoatra ilay sipan'i Hong Kong, ka tafakatra ho HK$1,100 isanolona ny tetibola raha tokony ho HK$300. Nefa ilay bandy tsy nanana afa-tsy HK$700 tany am-balahany, ahoana moa no hahafahany mandoa izany?
Mpisera iray hafa no nametraka ny eritreriny avy amin'ny kajy matematika fa hoe ilay vehivavy no diso :
99% = 女既要人請,男人要AA
0.9% = 女既要AA,男人堅持要請
0.1% = 女既要AA,男既要人請
99% = tian'ny vehivavy ho ny hafa no handoa ny lany ary ny lehilahy indray te-hifampizara ny lazambidy.
0.9% = te-hifampizara ny lazambidy ny vehivavy ary ny lehilahy misisika ny handoa ny lany.
0.1% = tian'ny vehivavy hifampizaràna ny lany saingy ilay lehilahy mitady olona hafa handoa ny lazambidy.
Misy mihitsy aza milaza fa “mpampanofa vatana amin'ny ampaham-potoanany” ilay vehivavy, izay nambabo ilay lehilahy mba hahazoana sakafo hariva avy amin'ilery, ary avy eo nandà ny hanao firaisana aminy ho takalony.
Na taorian'ny fanazavan'ilay tompon'ny trano fisakafoanana ny tantara ho an'ireo mpanangona vaovao aza, mbola maro no nisisika tamin'ny filazana hoe ilay vehivavy no niandohan'ny saritaka:
女方不能提出 AA 制
Raha miteny ilay bandy fa tiany ny handoa ny lazambidy,
tsy tokony hanosoka hevitra hifampisasaka ny lany intsony ilay ramatoa.
Satria toy ny tsy fanajàna an'ilay lehilahy ilay sosokevitra. Ny mamaly amin'ny fandoavana ny tsindrin-tsakafo, ohatra, na tapakila fijerena sarimihetsika, no tokony ho sosokevitr'ilay ramatoa.
Raha miteny ilay bandy fa tiany ny handoa ny lazambidy, ka mandà ilay fifandaminana ilay sipa jilajila, midika izany fa tsy tiany handeha lavitra ny fifandraisana. Mazava be izany.
Endri-javatra telo mety hiseho no nanaingoan'ilay artista Ar Chu azy tao anaty tantara an-tsary mahatsikaiky mba hanipihana fa, tsy miankina amin'izay fanapahankevitra noraisin'ilay ramatoa tamin'ny fandoavana ny lany, izy foana no tsy maintsy ifatraran'ny rihitra noho ireo fitsaratsarampoana raiki-tampisaka manjo ny vehivavy ao Hong Kong, antsoina hoe “Gong Nui ,” toy ny hoe tia tena, mpieboebo, mpirehareha sy mpiavon-tsy feno. Nampiasaina betsaka tany amin'ireo sehatra fifampiresahana tety anaty aterineto ilay fomba fiteny, nanomboka tamin'ny 2005, mba hanakianana sy hametahana filazàna ratsy ny fitondrantena asehon'ireo vehivavy.
Avy amin'ny tantara an-tsary “Is But Brother.” Nahazoan'ny Global Voices ny famoahana azy
Seho voalohany: Ramatoa: Aleo izaho no handoa ny lazambidy. Lehilahy: Heverinao tsy alehany angaha aho?
Seho faharoa: Ramatoa: OK, Avelako aloanao ny lany. Lehilahy: Inona no antony tokony hitondrako anao hisakafo hariva?
Seho fahatelo: Ramatoa: Aleo hifampisasahana ny lany. Rangahy: Heverinao fa tsy ho voaloako angaha ny sakafo hariva?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/28/98824/
 sasany amin'ireo fanehoankevitra mahazatra: https://mg.globalvoices.org”http://m3.hkgolden.com/view.aspx?message=6711231”
 mbola maro no nisisika : https://mg.globalvoices.org”http://forum3.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=6711944”
 nanaingoan'ilay : https://mg.globalvoices.org”https://www.facebook.com/isbutbrother/photos/a.764232056977277.1073741827.764219590311857/1340455106021633/?type=3&theater”
 Gong Nui: https://mg.globalvoices.org”https://en.wikipedia.org/wiki/Gong_Nui”